Ayihumshwanga ngendlela inkulumo kaZuma - IHhovisi | News24
Ayihumshwanga ngendlela inkulumo kaZuma - IHhovisi
Johannesburg - Isisho sesiZulu esisetshenziswe uMengameli uJacob Zuma ngesikhathi ehambele eSavanna Park, eyochitha usuku nabantu abadala kanjalo nabahlwempu, asihumushwanga neze ngendlela, kusho iHhovisi likaMengameli.
"UMengameli uZuma ukhulume encokola nabebehambele umcimbi, wathi akakabi nayo indlu yokugugela, abezindaba babe sebegijima nodaba bethi ukusho kukamengameli bekuchaza ukuthi akakamtholi unkosikazi wokugcina azoguga naye,"kusho isitatimende esikhishwe nguMkhulumeli kaZuma uMac Maharaj.
"Kubuhlungu ukuthi lokhu okubikwe yintathel kugcine kugqiba umsebenzi omuhle uZuma akade eyowenza,"kuqhuba uMaharaj.
Iphephandaba iThe Star, libike lathi ngokwesiZulu, uZuma ubesho ukuthi usengathatha unkosikazi wesihlanu, njengoba evele enabo abanye abane.
"Angakayakhi indlu yokugugela... laba ngisabathathile nje," iphephandaba licaphuna uMsholozi.
USolwazi uSihawu Ngubane, wase-University of KwaZulu-Natal, utshele iphephandaba wathi uma indoda isho isisho esisetshenziswe umengameli, isuke isho ukuthi isazoqhubeka ithathe.